नेपाल लगानी सम्मेलन : थाहा पाउनै पर्ने कुराहरू - Nepal Bahas Nepal Bahas
नेपाल लगानी सम्मेलन : थाहा पाउनै पर्ने कुराहरू
प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार २२:४८
काठमाडौं । नेपालमा दाेस्राे पटक लगानी सम्मेलन सुरु भएको छ । यसपटक सरकारले स्थिरता र समृद्धिको नारासहित विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित पार्न निकै कोशिश गरिरहेको छ।
लगानी सम्मेलनबाट सरकारको अपेक्षा के कानुनमा सुधार भए नेपालमा वैदेशिक लगानी बढ्ला ?
लगानीकर्ताहरूलाई बनिबनाउ विवरणसहित सार्वजनिक क्षेत्रका ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरि ७७ वटा परियोजना प्रस्तुत गरिएको छ।
तिनलाई प्राथमिकता प्राप्त कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात, शहरी, पूर्वाधार एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ। हरेक आयोजनाको छोटकरी विवरण र अनुमानित लगानी अनि त्यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया राखिएको छ।
उदाहरणका लागि यातायात पूर्वाधार अन्तर्गत राखिएको काठमाडाैं उपत्यका मेट्रो परियोजनाका लागि कति लम्बाईको हुने, कति रुट हुने अनि त्यसका लागि साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ हाराहारी आवश्यक लागतपर्ने सहित सम्पूर्ण विवरण दिइएको छ।
झण्डै ३० वर्षपछि करिब आधा दर्जनभन्दा धेरै आर्थिक सुधारसम्बन्धी नयाँ कानुन बन्दै छन्। सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन अनि विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधन भइसकेको छ।
त्यति मात्र होइन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र व्यापार नियमनका लागि आवश्यक सेफगार्डस्, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकस अनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि संसदमा विभिन्न चरणमा विचाराधिन छन्।
लगानी सम्मेलनको संघारमा संसदमा पेश भएका ती प्रस्तावित कानुनले नीतिगत सुधारमा ठूलो फड्को मार्न सघाउने सरकारको विश्वास छ । यो भन्दा पहिले २०४९ सालतिर नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनालगत्तै यसरी आर्थिक उदारीकरण तथा सुधारका निम्ति नौला कानुनहरू ल्याइएका थिए।
विगतमा भएका लगानीका प्रतिबद्धता केवल कागजमा सीमित भएका उदाहरण प्रशस्त छन्। भूकम्पपछि आयोजना गरिएको वृहत् दाता सम्मेलनमा साढे चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता भए तर व्यवहारमा त्योभन्दा निकै कम पैसा आयो।
पटकपटक विभिन्न सरकारहरूले कहिले वान विन्डो त कहिले वान स्टप शप भन्ने नाममा लगानीकर्ताहरूलाई एकीकृत सेवा दिने बताउँदै आए। तर ती व्यवहारमा प्रभावकारी नभएको गुनासो लगानीकर्ताहरूले गरि नै रहे।
यसपाली सरकारले यसैसाता पारित गर्ने गरि एउटा प्रस्ताव अघि सारेको छ। एकल विन्दु सेवा केन्द्र निर्माणको प्रस्ताव । उद्योग विभागमा राखिने त्यस्तो केन्द्रले झन्डै एक दर्जन सरकारी निकायहरूले दिने सेवा एकै ठाउँबाट दिनेछन्।
लगानीकर्तासँग सम्बन्धित चाहे भिसाको विषय होस् वा विदेशी विनिमय सुविधा, सबै सेवा एउटै विन्दुबाट उनीहरूले पाउनेछन्, त्यो पनि समयबद्ध तरिकाबाट।
५. कहाँ कहाँबाट को को सहभागी
यसपटकको लगानी सम्मेलनमा ४० देशका ६ सयभन्दा धेरै सहभागी छन्। सबैभन्दा धेरै चीन र त्यसपछि भारतका सहभागी छन्। विश्व ब्याङ्क तथा एसियाली विकास ब्याङ्कका उपाध्यक्षहरू पनि सहभागी छन्।
माइक्रोसफ्ट, अमेजन, चाइना रेलवे तथा युनिलिभर जस्ता कम्पनीका प्रतिनिधि पनि बोलाइएका छन्।